Layaabka Dunida: Maxaad Ka Taqaan Waddan Ay Ku Nool Yihiin In Ka Badan 27 Kun Oo Caruur Budhcad Ah?! | Foore News
Home Warar Layaabka Dunida: Maxaad Ka Taqaan Waddan Ay Ku Nool Yihiin In Ka...
Layaabka Dunida: Maxaad Ka Taqaan Waddan Ay Ku Nool Yihiin In Ka Badan 27 Kun Oo Caruur Budhcad Ah?!
Warbixin uu soo saaray guddiga carruurta ee dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in England ay ku nool yihiin ilaa 27 kun oo caruur burcad ah. Burcaddan ayaa da’dooda la sheegay inay u dhaxeyso 10 sano ilaa iyo 17 sano jir. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in 313,000 oo caruur ah ay yaqannaan xubnahaasi budhcadka ah, halka 34,000 oo kamid ahna ay dhibaato kala kulmeen budhacdda. Anne Longfield oo kamid ah guddiga carruurta ayaa sheegay in buracdda ay adeegsadaan xeelado aan la fahmi karin, si ay u tababaraan carruurta kale, ayna daacad ugu noqdaan.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa sheegtay inay ka go’an tahay sidii loo difaaci lahaa carruurta la duufsado ee kamid noqday kooxaha budhcadda ah. Sida ku cad warbixinta, carruurta buracdda ah ayaa dhibaateeya kuwa kale ee u nugul falalkan iyo kuwa ka xanuunsan dhimirka ee ay qoysaskoodu dayaceen. Gabadh la baxday magaca Sarah oo aan ahayn magaceeda rasmiga ayaa ku biirtay kooxaha budhcadda iyadoo 12 sano jir , waxaana ay sheegtay in xilligaasi ay tacadi kala kulantay ehelkeeda oo ay la noolayd. Waxay BBC-da u sheegtay inay isticmaasho maandooriye ay kamid tahay Kokeyn-ta. Walaalkeed iyada ka yar na wuxuu hore ugu biiray kooxaha budhcadda ah.
Sarah ayaa sidoo kale cabta khamriga oo waxaa ay gaartay heer lacag darteed ay “jirkeeda ka ganacsato”.
Warbixinta ayaa waxaa kale oo lagu xusay in dowladda dalkaasi ay ka warqabto oo keliya 6,500 oo ka tirsan kooxaha buracadda, balse aysan war ba u heyn kuwa kale. Ms Longfield oo ka mid ah guddigii warbixinta soo saaray ayaa intaa raacisay in calaamadaha lagu garto in carruurta ay ku biirayaan kooxahani ay kamid tahay carruurta oo isaga taga waxbarashada. “Halkii carruurtan looga arki lahaa in nolashan ay tahay mid ay doorteen, waxaan doonayaa in dadku ay u arkaan inay tahay arrin u baahan in caruurta laga difaaco oo sidoo kale loo arko inay tahay kuwa u nugul dhibaatada”, ayay raacisay. Qaar kamid ah hay’daha dalka Ingiriiska ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha carruurta ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid laga walwalo maadaama mas’uuliyiinta dowladda aysan ka warqabin.
Guddoomiyaha guddiga carruurta ee dalka Britain ayaa dowladda dalkaasi ugu baaqday inay mudnaan siiso sidii looga hor tagi lahaa carruurta ku biiraya kooxaha burcadda. “Anagaoo ka jawaabeyna warbixintan, waxaan soo jeedinayaa in dhinacyada ku howlan arrimaha carruurta oo ay kamid tahay dhanka waxbarashada, adeega bulshada iyo caafimmaadka inay wada shaqeeyaan, si wax looga qabto arrintan, iyadoo na loola tacaalayo sida caafimmaadka dadweynaha, waxaan lacag dhan 220 milyan oo gini aan ku taageri doonnaa caruurta iyo dadka da’da yar ee khatarta ugu jira inay ku biiraan kooxaha buracadda ah”, ayay tidhi. “Aad baan u yareyn xiligaasi oo waxaannu helnay lacag, aad baan ugu faraxsaneyn lacagahaasi aanu heleynay. Waxbadan kama aanan ogayn waxa socda”, ayey tidhi.
Previous articleWaligaa Ha Is Dhiibin Ardayoow!: Ninkii Imtixaanka Dugsiga Sare Ku Dhacay Ee Maal-qabeenka Noqday
Next articleShirkadda SOMGAS Oo Faahfaahisay Adeeg Cusub Oo Ay Macaamiisha Guryahooda Ugu Keeni Doonaan
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Oo Shir Deg Deg Ah Shalay Iskugu Yeedhay Golihiisa Wasiirrada Iyo Arrimo Xasaasi Ah Oo La Sheegay...
Musharaxiin Uu Kulmiye Il-duufay Iyo Kuwo Uu Ku Tilmaamay Inaanay Beelahoodu Isbixin Karin Oo Guulihii Ugu Cuslaa Ka Soo Hooyay Xisbiyada Mucaaaridka
Akhri Magacyada, Tirada Codadka Iyo Sida Ay Xisbiyadu Ugu Kala Calaf Qaadeen 60-kii Musharrax Ee Ku Tartamay Kuraasta Golaha Wakiilada G.Maroodi Jeex
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Oo Shir Deg Deg Ah...
Musharaxiin Uu Kulmiye Il-duufay Iyo Kuwo Uu Ku Tilmaamay Inaanay Beelahoodu...
Akhri Magacyada, Tirada Codadka Iyo Sida Ay Xisbiyadu Ugu Kala...